तीन वर्षमा १९ हजार ९१८ नागरिक बेपत्ता: धेरै बेपत्ता हुनेमा महिला, किन हुन्छन् त बेपत्ता ? – Etajakhabar
तीन वर्षमा १९ हजार ९१८ नागरिक बेपत्ता: धेरै बेपत्ता हुनेमा महिला, किन हुन्छन् त बेपत्ता ?
काठमाडौं । दैनिक १७ नेपाली बेपत्ता हुने गरेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा मुलुकभरबाट १८ हजार ९१८ बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा महिला र बालबालिकाको संख्या धेरै छ । हरेक वर्ष बेपत्ता हुनेको संख्या बढिरहेको छ ।
धेरै बेपत्ता हुनेमा महिला बेपत्ता हुनेमा सबैभन्दा धेरै महिला छन् । तीन वर्षको अवधिमा १० हजार २८३ महिला हराएका छन् । बेपत्ता हुने महिलाको संख्या ५४।३५ प्रतिशत छ । महिलापछि धेरै बालक हराएका छन् । यस अवधिमा तीन हजार १७९ बालक बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा वयस्क पुरुषको संख्या पनि धेरै छ । आर्थिक वर्ष ०७१(७२ देखि ०७४(७५ सम्म मुलुकभरिबाट तीन हजार १३१ वयस्क पुरुष बेपत्ता भएका छन् । तुलनात्मक रूपमा बेपत्ता हुने बालिकाको संख्या भने केही कम छ । तीन वर्षमा दुई हजार ३२५ बालिका बेपत्ता भएका छन् ।
लुकेर बस्नेका कारण बेपत्ताको संख्या बढी नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले बेपत्ता हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको बताए । भेटिएकाले प्रहरीमा रिपोर्ट नगर्ने र लुकेर बस्ने भएका कारण बेपत्ता हुनेको संख्या बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । ‘तथ्यांक हेर्दा बेपत्ता हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ । जब मान्छे हराउँछन्, तत्काल प्रहरीमा खबर गर्छन् । तर, भेटिएको खबर गर्दैनन् ।
कतिपय मान्छे आफैँ लुकेर बसेका हुन्छन् । विशेषगरी महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ,’ नेउपानले भने, ‘उनीहरू रोजगारका क्रममा कुनै पेसामा संलग्न हुन्छन् । तर, त्यो पेसा सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । त्यसवेला उनीहरूले आफ्नो वास्तविक परिचय ढाँट्छन् । यसले पनि बेपत्ता हुनेको संख्या बढेको देखिन्छ ।’
बेपत्ता हुनेको संख्या १८ प्रतिशतले वृद्धि प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बेपत्ता हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव ०७३(७४ मा सात हजार २७८ सर्वसाधारण बेपत्ता भएका थिए । यो संख्या आव ०७२(७३ को भन्दा १८।१५ प्रतिशतले धेरै हो । आव ०७२(७३ मा पाँच हजार ९५७ बेपत्ता भएका थिए । आव ०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षभन्दा एक हजार ३२१ बढी बेपत्ता भएका थिए । आव ०७१/७२ मा भने पाँच हजार ६८३ बेपत्ता भएका थिए । यो संख्या आव ०७२/७३ भन्दा २७४ ले र आव ०७३/७४ भन्दा एक हजार ५९५ ले बढी हो ।
किन हुन्छन् बेपत्ता ? प्रहरीका अनुसार फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर नगर्ने, अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने र परिचय लुकाएर रोजगारमा संलग्न हुने गरेका कारण बेपत्ता हुनेको संख्या बढी देखिएको हो । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेका अनुसार बेपत्ता हुनेमा महिलाको संख्या धेरै छ ।
धेरै मान्छे अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने र परिचय लुकाएर बस्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘महिला अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । यसको रेकर्ड कतै हुँदैन । धेरैजसो त आफन्तलाई ढाँटेर वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन्छन् । उनीहरूका आफन्तले प्रहरीमा हराएको निवेदन दिन्छन् । पछिल्ला दिनमा यस्ता घटना धेरै भएका छन्,’ डिआइजी न्यौपानेले भने, ‘कतिपय महिला आफूले गर्दै आएको कामबारे खुलाउन चाहँदैनन् । उनीहरू आफ्नो परिचय ढाँटेर बसेका हुन्छन् ।’
डिआइजी न्यौपानेका अनुसार केही मानिस भने साँच्चिकै बेपत्ता हुन्छन् । विशेषगरी बालबालिकाको हकमा यस्तो हुन्छ । ‘उनीहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट भारतका सर्कस, कोठीलगायत ठाउँमा बेचिन पुग्छन् । यसको रेकर्ड प्रहरीमा हुन्छ । त्यसो हुँदा बेपत्ताको संख्या बढ्न पुगेको हो,’ उनले भने । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०९, २०७४ समय: ७:५७:११
त्यो केटीसँग लभ गर्नु मेरो गल्ती हो ?गोरेबाट मारिनुअघि सनम…..!
शंकराचार्य सरस्वतीले के भने पूर्व राजा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ?
कुख्यात सुन तस्कर गोरे भन्छन्–मलाई मरौँ, मरौँ लाग्छ ! प्रहरीसमक्ष रुंदै भने मलाई बचाईदिनुस् है